Diiwaanka dhimashada dagaalka Qaza - BBC News Somali
Diiwaanka dhimashada dagaalka Qaza
8 Agoosto 2014
Image caption NIn Falastiini ah, oo xiran dhar leh dhiigga aabihii, oo ku barooranaya isbitaal ku yaalla Khan Younis.
Ku dhowaad 1,900 Falastiiniyiin ah, oo u badan rayid ayaa lagu dilay tan iyo markii uu bilowday howlgalka Isreal ay ugu magacdartay "Operation Protective Edge", howlgalka jiidda ka hortagga bilowgii bishii July.
ill lixdan iy lix Israa'iiliyin ah - laba maahee inta kale ay askar yihiin ayaa ku dhintay howlgalka ay Isreal leedahay waxaa ku burburinayaa gantaalaha iyo waddooyinka dhulka hoostiisa ee kooxda Islaamiyiinta Xamaas.
Maxaan kala soconnaa dhimashada dadka iyo goobaha lagu dilay?
Sida ay xusayaa tiro laga helay xafiiska Qaramada Midoobay ee isku duwidda arrimaha bini'aadaminimada ee (OCHA), ilaa 6dii August, tiro kun sideed boqol iyo sagaashan Falastiiniyiin ah ayaa naftooda ku waayay dagaalka.
Ragga, Dumarka, iyo caruurta dhimatay
Image caption Garaafka dhimashada
Qofka ugu yaraa ee dhinta waxaa uu jiray toban maalmood, iyadoo qofka ugu wayna uu boqol jir ahaa.
Iyadoo QM ay ku tilmaantay maleeshiyada la dilay in ay ka yar yihiin 200 tiro ahaan, hadana Israel ayaa sheeganaysa in ay dishay ilaa 900 maleeshiyo Falastiniyiin ah oo dagaalka ku jirtay.
Guud ahaan magaalada Qaza ayay Falastiiniyiintu ku dhinteen, marinka Qaza oo ilaa 40km dherer ahaan ah iyo 10km ballac.
Tirada ugu badan waxay dadku ku dhinteen Khan Younis, koonfurta Qaza iyo waqooyiga magaalada Qaza.
Qaar badan ayaa gabaad ka dhigtay oo u cararay Qaramada Midoobay meelo ay maamusho oo ay ku jiraan iskuullo. Balse, iskuulada QM ayaa laftooda la weeraray oo ku jiraan kuwo ku yaallay waqooyiga Qaza, Jabaliya iyo Rafah.
Dhinaca kale, laba Israa'iiliyiin rayid ah ayaa ku dhintay Xayfa goob bar koontarool ah ee xadka Erez ee waqooyiga Qaza. Shaqaale beeraha ka shaqeeya oo u dhashay Thailand ayaa isna ku dhintay Ashkelon.
Goobaha dadka lagu dilay
Image caption Goobaha ay dadka Gaza ku dhinteen